Unsafe Contraceptive Methods – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သန်ဓတေားနညျးမြားစှာရှိတဲ့ထဲမှာမှ အခြို့သော သန်ဓတေားနညျးတှဟော စိတျမခရြဘဲ ကိုယျဝနျရနိုငျခအြေလှနျမြားပါတယျ။
ဒီလိုသန်ဓတေားနညျးတှကေို မသိလိုကျဘဲ ယုံကွညျစိတျခစြှာ သုံးလိုကျမိမယျဆိုရငျ မမြှျောလငျ့ဘဲကိုယျဝနျရသှားနိုငျတာကွောငျ့ ဒီလိုနညျးလမျးတှကေို ရှောငျရှားနိုငျအောငျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မိနျးမကိုယျပွငျပသုတျလှတျခွငျးဟာ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျခအြေမြားဆုံးသန်ဓတေားနညျးတှထေဲကတဈခုဖွဈပါတယျ။ သုတျပိုးဟာ ဆန်ဒပွီးမွောကျခြိနျမှာထှကျတဲ့ သုတျရညျထဲမှာတငျမကဘဲ အစောပိုငျးထှကျတဲ့ ရှပွေ့ေးအရညျကွညျတှထေဲမှာပါ ပါတာကွောငျ့ ကိုယျဝနျရနိုငျခမြေားခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အခြို့အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ ဆန်ဒပွီးမွောကျခါနီးအခြိနျမှာ စိတျမထိနျးထားနိုငျဘဲ မအင်ျဂါထဲသုတျရညျတခြို့တဝကျဝငျသှားတာ ကွောငျ့လညျး ကိုယျဝနျရတာမြိုးတှရှေိပါတယျ။
လတဈလရဲ့ ရာသီမလာမီ ၇ ရကျနဲ့ ရာသီစလာတဲ့ရကျကနေ ၇ရကျ(ရာသီလာရကျတှအေပါအဝငျ) ဟာ ကိုယျဝနျရနိုငျခနြေညျးတဲ့ ရကျတှဖွေဈလို့ ထိုရကျတှမှောအတူနပွေီး ကနျြရကျတှကေိုရှောငျခွငျးကို ရကျရှောငျတဲ့ ကိုယျဝနျတားနညျးလို့သတျမှတျပါတယျ။
(ကနျြရကျတှဟော သားဥကွှနေိုငျတဲ့ရကျတှဖွေဈလို့ ထိုရကျတှမှောအတူနမေိရငျ မမြိုးဥနဲ့သုတျပိုးတှသှေ့ားပွီး သန်ဓအေောငျ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျပါတယျ။) ဒါပမေယျ့ ဒီနညျးဟာ ရာသီရကျမမှနျသူတှေ၊ ဆယျကြျောသကျတှေ၊ မီးဖှားပွီးကာစသူတှေ၊သှေးဆုံးခါနီးအမြိုးသမီးတှမှော စိတျမခရြပါဘူး။
ထို့ပွငျ သားဥ (မမြိုးဥ)ဟာ လတဈလရဲ့ ဘယျရကျမှာမဆိုကွှနေိုငျတာမို့ ရကျရှောငျနညျးဟာလညျး စိတျခရြတဲ့ကိုယျဝနျတားနညျးတော့မဟုတျပါဘူး။
ဒါကတော့ စိတျခရြပွီး ကိုယျဝနျရနိုငျခအြေလှနျနညျးပါးတဲ့ နစေ့ဉျသောကျရတဲ့တားဆေး၊၃လခံဆေး (ဒကျပို)ထိုးခွငျး၊အကာအကှယျကှနျဒုံးသုံးခွငျး၊သားအိမျတှငျးပစ်စညျးထညျ့ခွငျး၊လကျမောငျးတှငျးပစ်စညျးထညျ့ခွငျး စတဲ့ ကိုယျဝနျတားနညျးတှကေို စနဈတကမြသုံးလြှငျ ၊ ညှနျကွားခကျြအတိုငျးလိုကျနာမှုမရှိလြှငျ စိတျခရြမှုလြော့နညျးသှားပွီး ကိုယျဝနျရနိုငျခမြေားသှားတတျပါတယျ။ဒါကတော့ ကိုယျဝနျတားနညျးရဲ့အားနညျးခကျြမဟုတျဘဲ သုံးစှဲသူရဲ့လိုအပျခကျြပါ။
မိမိအနနေဲ့အခွအေနအေမြိုးမြိုး၊အကွောငျးအရငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ကိုယျဝနျမလိုခငျြသေးဘူးဆိုရငျတော…. စိတျမခရြတဲ့ကိုယျဝနျတားနညျးတှကေို ကွိုတငျသိရှိရှောငျရှားသငျ့ပွီး မိမိနှငျ့မိမိအဖျောအတှကျသငျ့လြျောမယျ့ စိတျခရြတယျ့ကိုယျဝနျတားနညျးကို စနဈတကမြှနျမှနျကနျကနျသုံးဖို့ အကွံပွုတိုကျတှနျးလိုကျပါရစေ။
သန္ဓေတားနည်းများစွာရှိတဲ့ထဲမှာမှ အချို့သော သန္ဓေတားနည်းတွေဟာ စိတ်မချရဘဲ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေအလွန်များပါတယ်။
ဒီလိုသန္ဓေတားနည်းတွေကို မသိလိုက်ဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးလိုက်မိမယ်ဆိုရင် မမျှော်လင့်ဘဲကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်တာကြောင့် ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ပြင်ပသုတ်လွှတ်ခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ချေအများဆုံးသန္ဓေတားနည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သုတ်ပိုးဟာ ဆန္ဒပြီးမြောက်ချိန်မှာထွက်တဲ့ သုတ်ရည်ထဲမှာတင်မကဘဲ အစောပိုင်းထွက်တဲ့ ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်တွေထဲမှာပါ ပါတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေများခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အချို့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ဆန္ဒပြီးမြောက်ခါနီးအချိန်မှာ စိတ်မထိန်းထားနိုင်ဘဲ မအင်္ဂါထဲသုတ်ရည်တချို့တဝက်ဝင်သွားတာ ကြောင့်လည်း ကိုယ်ဝန်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။
လတစ်လရဲ့ ရာသီမလာမီ ၇ ရက်နဲ့ ရာသီစလာတဲ့ရက်ကနေ ၇ရက်(ရာသီလာရက်တွေအပါအဝင်) ဟာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေနည်းတဲ့ ရက်တွေဖြစ်လို့ ထိုရက်တွေမှာအတူနေပြီး ကျန်ရက်တွေကိုရှောင်ခြင်းကို ရက်ရှောင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနည်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
(ကျန်ရက်တွေဟာ သားဥကြွေနိုင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်လို့ ထိုရက်တွေမှာအတူနေမိရင် မမျိုးဥနဲ့သုတ်ပိုးတွေ့သွားပြီး သန္ဓေအောင် ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ပါတယ်။) ဒါပေမယ့် ဒီနည်းဟာ ရာသီရက်မမှန်သူတွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေ၊ မီးဖွားပြီးကာစသူတွေ၊သွေးဆုံးခါနီးအမျိုးသမီးတွေမှာ စိတ်မချရပါဘူး။
ထို့ပြင် သားဥ (မမျိုးဥ)ဟာ လတစ်လရဲ့ ဘယ်ရက်မှာမဆိုိုကြွေနိုင်တာမို့ ရက်ရှောင်နည်းဟာလည်း စိတ်ချရတဲ့ကိုယ်ဝန်တားနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကတော့ စိတ်ချရပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေအလွန်နည်းပါးတဲ့ နေ့စဉ်သောက်ရတဲ့တားဆေး၊၃လခံဆေး (ဒက်ပို)ထိုးခြင်း၊အကာအကွယ်ကွန်ဒုံးသုံးခြင်း၊သားအိမ်တွင်းပစ္စည်းထည့်ခြင်း၊လက်မောင်းတွင်းပစ္စည်းထည့်ခြင်း စတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေကို စနစ်တကျမသုံးလျှင် ၊ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာမှုမရှိလျှင် စိတ်ချရမှုလျော့နည်းသွားပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေများသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ကိုယ်ဝန်တားနည်းရဲ့အားနည်းချက်မဟုတ်ဘဲ သုံးစွဲသူရဲ့လိုအပ်ချက်ပါ။
မိမိအနေနဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုး၊အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်ဝန်မလိုချင်သေးဘူးဆိုရင်တော…. စိတ်မချရတဲ့ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေကို ကြိုတင်သိရှိရှောင်ရှားသင့်ပြီး မိမိနှင့်မိမိအဖော်အတွက်သင့်လျော်မယ့် စိတ်ချရတယ့်ကိုယ်ဝန်တားနည်းကို စနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးဖို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။